SKYPE EE ANDROID 🤑 Skype For Android Tablet
Microsoft waxaa loo aqoonsan yahay mid ka mid ah shirkadaha ugu sareeya macaamiisha-oriented software. Waxa uu had iyo jeer bilaabay barnaamijyo taasoo keeni karto istareexsan oo sahlanaato in dadka isticmaala ay. Si joogto xiran dunida, inay sameeyaan fariimaha qoraalka ah iyo si ay u qabtaan video ama audio calls, Microsoft ayaa loogu talagalay in ay app wayn oo rasmi ah si weyn loo yaqaano Skype dadka isticmaala ay Android.
Skype loox android
Sida laga soo xigtay baadhitaanka, in ka badan 250 million users isticmaalayso Skype sida qalab ay isgaarsiinta. Iyo tirada dadka isticmaalaya sii kordhaya iyadoo maalin walba marayay ay sabab u tahay qaab hufan. Tani app by Microsoft aad u saamaxaaya in ay wali wax ka mid ah dadka isticmaala oo isticmaalaya Skype. Waxaad u baahan tahay oo kaliya a internet wanaagsan ama xogta gacanta in ay galaan adduunka ee isdhexgalka Skype.
telefoonada Your android ha kartaa inaad la hadasho qof aad rabto laakiin iyadoo la kaashanayo Skype, Waxa kale oo aad isdhexgalka kartaan video la isticmaala kale. App Tani gaar ah waa intaas dheer ka beddeli isticmaala Android a. Haddii aad rabto in aad hagaha dhamaystiran oo Skype dadka isticmaala Android, geedi socodkeeda iyo isticmaalka, qaababka ay cajiib ah oo ku laayeen tartan ka dibna sii reading this article waxtar leh.
Degsado Skype for Android
Ayaad ugu heli kartaa this app Skype caan ah oo ku saabsan qalabka aad android by soo socda talaabooyin fudud
Tag ciyaari dukaanka ku saabsan qalabka iyo s aad androidearch for Skype ama download ka link la siiyey HALKAN.
Click on the Ku rakib button waayo, dajinta iyo rakibidda Skype.
Marka aad ku rakiban app aad, hadda guji iyo aad u hesho diiwaan gashan in app
waxaa loo baahan yahay in aad geli account email iyo password.
Waxaad isticmaali kartaa account jira laakiin haddii aadan ka dibna aad ka dhigi a mid cusub.
Dooro Name Skype, taas oo loo isticmaalayo sidii aad Skype ID si ay u bilaabaan soo wacaya.
1 Skype Login Wajahadda:
1.1 Ku dar Nala Xiriir & samee Call
1.2 Features ee Skype:
1.3 High Quality-Video & Wicitaanada Audio:
1.4 Sharing Screen on Skype
2.0.1 Edge tartan rasmi ah ee Skype:
3 Skype qalabka oo dhan:
3.0.1 Skype labada calls online iyo offline
3.1 Wac On diro telefoonnada guryaha & Numbers Phone Mobile Iyadoo Skype:
3.2 Inbadan oo ka socda goobtayda
Skype Login Wajahadda:
Ku dar Nala Xiriir & samee Call
Waayo, isagoo intaa ku daray xiriirada on Skype, waxaad arki doontaa guddi oo muujinaysa dhamaan isticmaalayaasha, kuwaas oo hore u isticmaali jiray Skype iyo ku xiran yihiin xisaabtaada e-mail. Hab kale waa in aad fariin ama e-mail qof kasta oo isticmaalaya Skype iyo ku dari kartaa in ay ID Skype si bilaabi kartaa wacaya kasta oo kale oo.
Waxaad ku dari kartaa wax xiriir ah by xulashada Ku dar qof menu ugu weyn ee Skype. Waxa kale oo aad ku dari kartaa isticmaala looga baahan yahay si fudud qoraal ay username Skype ka dibna gujinaya ku dar in ay xiriirada. Waxaa intaas dheer in this, waxa kale oo aad ka dhigi kartaa liiska xiriirka ugu isticmaalay by iyaga oo intaa ku daray galay aad Add in muuqaalada jecel yahay ee. Waxa kale oo aad xannibi karaa ama ka saar xiriirka arrimaha gaarka ah iyo ammaanka.
Features ee Skype:
Skype by Microsoft waxaa u adeega macaamiisha ay la sabab u gaar ah in dalalka odhan Hi qof kasta oo adduunka ah.
Fikradda ka danbaysa ay tahay in hoos u masaafada oo aad u stress-free ay dadku weli lala xiriirinayaa. Tani waa mid aad u faa'iido inuu sii joogo xiran qoyskaaga iyo ururada marka aad aan jidh ahaan la xiriiri kartaa iyaga.
Skype ayaa liiska weyn ee macaamiisha ku qanacsan. On joogta ah maalin walba, malaayiin qof ay isticmaalaan Skype si chat ama wac dadka kale. Skype waxaa bixinaya muuqaalada kala oo ay ku jiraan.
High Quality-Video & Wicitaanada Audio:
Skype waxaa macquul ah loogu talagalay in la siiyo video galbeed oo tayo sare leh iyo natiijooyinka calls audio in ay macaamiisheeda. Waxaad la kulmi kartaa crystal video cad oo maqal ah oo ku baaqay in adduunka oo dhan.
Qaybta ugu wanaagsan waa, Skype siinaysaa natiijooyin ay si mug leh oo tayo leh oo labaduba ka mid ah in ay ka mid calls ama calls group. Waa in aad hubisaa in aad isticmaasho a internet wanaagsan in ay ka fogaadaan wax kasta oo wax qash-aad video ama wicitaanada dhigi.
Tani waa feature a aad u faa'iido badan ay bixiyaan Skype. Iyada oo taageero ka qaybsiga screen, aad ku haboon wadaagi kartaa bandhigyo aad, sawiro, waraaqaha ama wax lagu jiro call a.
Tani waa gelitaanka faa'iido dunida shirkadaha. Shaqaalaha wadaagi karaan faylasha ama waraaqaha muhiimka ah oo ay, show bandhig, faahfaahinta mashruuca, falanqaynta dhaqanka, shuruudaha macmiilka iyo sidoo kale xallin kartaan arrimaha lagu jiro oo ku baaqay in ay.
Haddii aad rabto in aad ku dhuuman aad chat ama ku baaqay in ammaanka ama shakhsi kasta oo sababaha, markaas waxaad ku samayn kartaa si fudud iyada oo loo marayo Skype. App Tani awood u leedahay in wada hadal gaar ah la joojiyo nidaamka dhamaadka sirta ah.
Skype ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad si aad u qortid video ama audio calls. Tani waa faa'iido leh marka aad rabto si ay u qoraan fariin kasta oo qaali ah ama daqiiqad. Waxa kale oo sahasha in waxbarashada iyo xusay hoos dhibcood in aad seegtay in inta lagu guda jiro wicitaankaaga.
Habkaani sidoo kale u shaqeeya shirkadaha dunida, haddii aad rabto in aad mar kale aad dhegaysato macallin ama tababaraha tilmaamaha, si fudud aad u samayn kartaa adigoo daawanaya la duubo wicitaanada aad.
Edge tartan rasmi ah ee Skype:
Skype ayaa u adeega macaamiisha ay ka badan 10 sano. Microsoft waa kan Rafaa ah ee suuqa this tartan ayaa soo saaray app telefoonka video this u adeegta muuqaalada dheeraad ah oo kula tartamaya kale sida waqtiga wejiga, labada ciyaaryahan ee Google, iwm. aan la gaarsiiyo. Tani waa sababta in app this waa mid ka mid ah barnaamijyadooda ugu used adduunka oo dhan. The feature tartan caan ah waxaa ka mid ah
Skype qalabka oo dhan:
asal ahaan, Skype waxaa loogu talagalay user ah android ay ka mid yihiin telefoonada gacanta Android, kiniiniyada Android, iyo apps kale Android. Laakiin qayb ka mid xiiso leh waa Skype ayaa sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa dhammaan waxyaabaha kale oo ay ku jiraan Microsoft Windows, Linux, Macintosh, Blackberry, iyo dhammaan kiniin Apple iyo casriga ah. Haddii aad leedahay qalab kasta oo aad u leeyihiin in ay soo bixi Skype oo wuxuu ku raaxaysan kartaa mid ka mid ah Chine taleefoonka interactive video ugu.
Skype labada calls online iyo offline
Cunsur kale oo tartan rasmi ah ee this app Skype kama dambaysta ah ma aha waxaad wici kartaa oo kaliya dadka online laakiin sidoo kale wici kartaa si aad u xiran dadka aan haysan internet ah. Skype ayaa soo jeediyay dalab premium si dadka isticmaala ay u yeedhaan on tirada mobile iyo lambarrada telefoonka guriga.
Wicitaanada online caadiga ah, Qasab ma aha in aad bixiso wax. All aad u baahan tahay waa xiriir internet aad u meel call a. Laakiin for ugu baaqay lambarada telefoonka ama lambarada telefoonka guriga, Skype eedeeyo Times aad dhaqaale in dadka isticmaala ay. Gunnooyinka kale oo caan ah oo Skype dadka isticmaala ay yihiin
Waxaad u dhigi karto ku baaqay in qoyskaaga, asxaabta ama saaxiibo meel kasta oo dunida dacaladeeda. Skype waxaa bixiya qorshaha ugu yeerida aad u kharash-ool ah dalalka kala duwan aduunka oo dhan.
Waxa intaa dheer in dadka isticmaala Android, Tilmaamo kuwanu waa lagu dabaqi karo in qalab ay ka mid yihiin desktop kasta, iPhone, Xbox, OSX iyo qaar badan oo
Skype macaamiisha u oggolaanaya in ay habab badan oo in lagu bixiyo Macmiil-ka oo ay ku jiraan Visa, kaarka Master, JCB, PayPal, tafaariiqda, Apple In-App Iibso, express American, Western Union iyo qaar badan oo
Geedi socodka waa mid aad u fudud. Waxaa laga yaabaa inaad bixiso lambarka, ka dibna soo bixi app Skype iyo bilowdo wacaya la software ugu fiican video taleefoonka.
Wac On diro telefoonnada guryaha & Numbers Phone Mobile Iyadoo Skype:
Si aad u samayso Skype-ka-soo diro calls on Skype isticmaalaya telefoonka android waxaad u baahan doontaa Skype credit.
Guji xiriiriyaha amaahda ee Skype in aad ku darto credit Skype in aad xisaabta.
Haddii aadan haysan credit Skype iyo inaad isku deyeyso inaad u samaysaa call a Skype-to-landline, Skype waxay kuu soo diri doontaa koonto kor ku xusan koontadaada.
Waxaad ka heli a Times Skype bil kasta ama aad top-up karaa iyadoo la isticmaalayo lacagaha hal-off kartaa.
Calan u Times bil kasta, haddii Skype loo isticmaalo calls caalamiga aad maalin walba. Waxaad u baahan doontaa kaarka deynta si aad u adeegsato nidaamka diiwaangelinta.
Xullo qadarka sumcadda Skype ee aad jeclaan lahayd inaad kudarto iyo riix 'Continue'.
Click on sanduuqyada madhan iyo bilowdo buuxinta faahfaahinta biilka aad ka diiwaan gashan in kaarkaaga debit.
Iibsato aad credit oo aad diyaar u tahay in ay isticmaalaan Skype yihiin.
Hadda aad soo iibsatay qaar ka mid ah credit Skype aad bilaabi kartaa wacaya lambarada telefoonka guriga ama telefoonada gacanta.
Si aad u bilowdo, guji icon telefoonka sida hoos ku qoran ee image ah.
Wac lambarka aad rabto in aad la ku daray code oo ka mid ah dalalka kala hadasho iyo Riix Button Call.
Deldel marka aad dhamaysid aad call.
Si aad ku dari Click lambarka telefoonka guriga on 'dar' markaa geli nambarka taleefanka dhulka aad rabto inaad kudarto liiskaaga.
Waad ku iibsan kartaa lambarkaaga kuu gaarka ah ee 'Skype' lacag yar oo faa'iido u leh qofkastoo kugu soo wacaya kaasoo aan horay ugu jirin Skype.
Rajeynaya in aad ku rakiban app Skype si guul. Haddii aad soo food saartay dhibaato kasta oo, kaaga dhacdo arrin sanduuqa comment. weydiimo Your lagu xallin doono sida ugu dhaqsaha badan. Raac dhammaan tallaabooyinka haynay samir, xaqiiqdii waad awoodi doontaa inaad si fudud u adeegsan karto Skype.